Sheekada filimka Petta: Xarakaadka Rajinikanth iyo fariin macquul ah ugu imaaw filimkan – Filimside.net
Sheekada filimka Petta: Xarakaadka Rajinikanth iyo fariin macquul ah ugu imaaw filimkan
Waa masuuliyad adag Superstar-ka ugu awooda badan Koonfur Hindiya sidoo kalena 30-sano ugu dambeesay reer Tamil Nadu madadaalo kaga barteen in loo sameeyo filim taageerayaashiisa qancin karo dhan walbo.
Sidaa darteed Director Karthik Subbaraj wuxuu ku dhiiraday inuu la shaqeeyo Superstar Rajinikanth (Jeestoole) waxayna ku midoobeen mashruuca xiisaha badan Petta oo ah filim mada daalo dhameestiran dhan walbana Rajini sheekadiisa lagu dhisay qaabka uu dadka u mada daalin karo.
Jilaayaasha Rajinikanth, Vijay Sethupathi, Nawazuddin Siddiqui, Bobby Simha, J. Mahendran, Yogi Babu, Trisha, Simran
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 52-daqiiqo
Fariinta Kooban Filimka Petta Xambaarsan Yahay: Kaali (Rajinikanth) wuxuu ku biiraa kuleej dhalinyarada wax ku bartaan asigoo shaqadiisa tahay inuu halis walbo ka difaaco gaar ahaan tuugada ardayda dhibaatada u geestaan wuxuuna halis badan ka difaacaa lamaana kuleejka dhigtaan ee is doorteen Megha Akash iyo Sanath.
Sidoo kalena Kaali (Rajinikanth) wuxuu jaceyl la wadaagaa gabadha uu kuleej-ka garab ku siiyo Sanath hooyadeed Simran laakiin farxadiisa iyo noloshiisa dagan halis badan ayaa soo wajaheyso.
Lamaanaha dhalinta yar ee is doorteen sidoo kalena kuleej-ka dhigtaan waxaa halis ku ah noloshooda Michael (Bobby Simha) taasi oo ku qasbeyso Kaali (Rajinikanth) inuu cagta mariyo wax walbo oo halis ku ah farxada lamaana dhalinta yar iyo guud ahaan shaqada kuleej-ka.
Laakiin tuuga dhibka badan ee isla weyn Michael (Bobby Simha) wuxuu isku haleenaa qoyskiisa awooda badan ee uu hogaamiyaha u yahay siyaasaga wax walbo sameyn karo Singhar Singh (Nawazuddin Siddique).
Singhar Singh (Nawazuddin Siddique) oo kaashanayo wiilkiisa rabshada badan Jithu (Vijay Sethupathi) waxay isku baheesanayaan la dagaalanka Kaali (Rajinikanth) oo isagana horey noloshiisii hore usoo bur burtay laakiin markaan marnaba aqbali doonin farxada lamaanaha is doorteen iyo nolosha cusub uu sameestay.
Filimka Petta waxaa qaybaha dambe loo daawan doonaa dagaalka iyo xifaaltanka dhex mari doono Rajinikanth oo awood lasoo baxaayo iyo labada laga wada cabsado Singhar Singh (Nawazuddin Siddique) iyo Jithu (Vijay Sethupathi).
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Petta:
Petta waa filim Rajinikanth awood loo gacan galiyay kuna soo bandhigaayo xarakaadkiisa, Action-kiisa iyo hadaladiisa dadka soo jiitaan. Si gaar ah Director Karthik Subbaraj wuxuu diirada saaran awood siinta Rajini ka fikirada qancinta taageerayaashiisa waxaa fiicneyd sida guud fariintan inuu isku dheeli tiro.
Petta waa filim fariin ahaan iska dhex dhexaad ah sidoo kalena sheekadiisa la fahmi karo halka ay socoto waxa ku xiiso galinaayo ayaa ah 68-jirka Rajini sida uu weli yahay Superstar tamar badan u haayo mada daalinta daawadayaashiisa.
Bandhiga Jilaayaasha: Rajinikanth marnaba lagama yaabo shaashada inuu kugu niyad jebiyo xarakaad iyo jeesto walbo aad ka fileesay ayuu filimka Petta kusoo bandhigay waa hubaal in taageerayaashiisa sacab iyo foori ku waalan doonaan marka ay tiyaatarka ku jiraan kani waa halyee u taagan mada daalinta kumanaan taageero ah oo isaga ku xiran.
Labada atirisho filimkan ku jiraan Trisha iyo Simran muuqaal badan kuma laho balse doorarkooda waa mid micno sameenayo sida shaashada laga fahmi karo.
Labada laadar filimkan Nawazuddin iyo Vijay Sethupati iyagana kaalintooda ayay kasoo baxeen sidoo kalena waxay ku amaanan yihiin inay Petta ka dhigeen mid Rajinikanth kaligiis loo daawan doonin qaybaha dambe filimkan.
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka Petta:
Xarakaadka iyo jeestada Rajini oo aan inaba waxba la siisan karin.
Jilaayaasha caawiyaha ka ah filimkan oo doorar wacan qaateen kaalintoodana kasoo baxeen
Muusiga iyo qaabka filimkan loo faaf reebay oo heer sare ah.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Petta:
Fariintiisa waa mid laga soo tagay ama sheekooyinkii hore ayuu xambaarsan yahay.
Qaybta labaad filimkan ama halka saac dambe xoogaa habacsanaan ayaa ka muuqato qaabka fariinta loo dhigay.
Qiimeynta Filimka Petta: 3/5 (Sedex xidig)
Gunaanad: Petta waa filim xasuus ku galinaayo una moodid Superstar Rajinikanth-gii 90-maadkii inuu dib usoo laabtay balse waa 68-jir dhalinyaro ka karti badan, waa hubaal in taageerayaashiisa filimkan daawasho ahaan ka daali doonin, balse dadka dhex dhexaadka ah ee Rajini taageero u ahayn sidoo kalena fariin heer sare ah rabaan inay lacagtooda ku badashaan filimkan waqti badan kuma lumin doonaan.
Sidaa darteed guusha filimka Petta waxay ku xirnaan doontaa marka laga soo tago taageerayaasha Rajinikanth dadka kale hadba sida ay ugu soo daawasho tagaan madaama taageerayaasha Rajini kaliya mashruucaan miisaaniyada xoogan xambaarsan bad baadin karin.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Petta iyo sida uu Superstar Rajinkanth u xarakeenayo: